Ankatoky ny fety: miakatra avokoa ny vidin’ny PPN | NewsMada
Ankatoky ny fety: miakatra avokoa ny vidin’ny PPN
Miakatra tsikelikely ny vidin’entana eny an-tsena amin’izao ankatoky ny fety izao. Tsy misy hitarainana ny mpanjifa fa tsy maintsy mividy. Tsy misy miteny ny tompon’andraikitra.
Manararaotra mampiakatra ny vidin’entana ny mpivarotra rehefa akaiky fety toy izao. Tsikaritra ho nisy fiakarany ny ankamaroan’ireo kojakoja ilaina amin’ny fiainana andavanandro eto Antananarivo. Hatrany amin’ny mpamongady mihitsy io fiakaran’ny vidin’entana io raha ny filazan’ny mpaninjara.
Anisan’ny tena nisongadina ny fiakaran’ny vidin’ny lafarinina. Manodidina ny 10.000 Ar ny fiakaran’ny vidin’ny iray kitapo. Efa tao anatin’ny roa herinandro izany fiakarana izany. Betsaka ireo manao kaomady mofo mamy rehefa fetin’ny Krismasy sy faran’ny taona ka voatery hampiakatra ny vidin’ny mofo mamy amidiny ihany koa vokatr’izany fiakaran’ny vidin’ny lafarinina izany.
Niakatra ny vidin’ny menaka fihinana, teo aloha 5000 Ar izany ary tafakatra hatrany amin’ny 5500 Ar ny litatra amin’izao fotoana. Eo koa ny siramamy, nisy fiakarany 100 Ar ny kilao. Ny vary manodidina ny 700 Ar ny kapoaka raha novidiana 600 Ar izany teo aloha.
Miakatra koa ny vidin’ny labozia, manararaotra ny delestazy mivaivay, amin’izao fotoana. Labozia vaventy 500 Ar niakatra 550 Ar eny an-tsena. Ny vovon-kafe, savony… nisy fiakarany 50 Ar.
Anisan’ny tena mampimenomenona ny ray aman-dreny manan-janaka kely koa ny fiakaran’ny rononon-jaza. Efa tafakatra 20.000 Ar izany amin’ny toerana sasany. 2000 Ar ny fiakaran’ity rononon-jaza ity izay antoky ny fitomboan’ny zaza mihitsy na ara-tsaina na ara-batana.
Manahy ny mety mbola hiakaran’izao vidin’entana izao ny rehetra aorian’ny fety, indrindra aorian’ny fifidianana, raha sanatria ka hisy ny krizy izay toa mandindondindona ny firenena.